မြောက်ပိုင်းကျောင်းသားတပ်မတော်ကို ဖြိုခွဲသွားတဲ့ တရားခံအစစ်က ဘယ်သူတွေလဲ (၅) ~ Nge Naing
Tuesday, April 03, 2012 Nge Naing 12 comments
"သမိုင်းဆိုတာ အမှန်တကယ်အများအ တွက် ဘယ်သူ ဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို မှတ်တမ်းတင်တာပါ။ အပြောသမားတွေအတွက် နေရာမရှိပါဘူး။ သူများကို သမိုင်းမှာ နာမည်ဆိုးတွင်ရစ်မယ်လေး ဘာလေးနဲ့ ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့သူက ယောက်ျားရင့်မကြီးဖြစ်ပြီး မဟုတ်ဘဲ လုပ်ကြံပြောဆိုရေးနေတဲ့အပေါ် အနည်းဆုံး တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ရှက်ရကောင်းမှန်းတောင် မသိသေးတာ သနားစရာပဲ"
အရင်ပိုင်းတွေကို မဖတ်ရသေးသူများအတွက် အပိုင်း (၁) အပိုင်း (၂)၊ အပိုင်း (၃) နဲ့ (၄) အပိုင်း ၂-၄ ကို အပိုင်း (၁) ရဲ့ Comment အောက်က သူများလာထည့်ထားပေးတဲ့ မှတ်ချက်တွေမှာ လည်း ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
တချိန်မှာ ဒါတွေအတွက် အမှန်တရားဖော်ထုတ်ပေးဖို့ ရဲဘော်ထွန်းအောင်ကျော်နဲ့အတူ အားလုံးက ဆန္ဒကိုယ်စီ ရှိနေခဲ့ ကြတယ်ဆိုတာ အမှန်ပါ။
ဒါပေမဲ့ တော်လှန်ရေးမှာ နောက်ထပ်နစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်အောင် ဒါတွေကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ပြန်အသုံးချနေတာမျိုးကိုတော့ ရဲဘော်ထွန်းအောင်ကျော် လိုလားနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ ကျမ မယုံပါဘူး။ ဒါကို ရဲဘော် ထွန်းအောင်ကျော်ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်ပါလို့ ကြွေးကြော်နေတဲ့ ကိုအောင်မိုးဝင်း မသိကျိုးကျွန်လုပ်ပြီး အသုံးချနေတာ တော့ ကျမအတွက် နည်းနည်း ထူးဆန်းနေပါတယ်။ (ဖြစ်ရပ်မှန်ကို ရိုးသားစွာ ဖော်ထုတ်တင်ပြနေတာကို မဆိုလိုပါ)
နေ့သစ်မှ ပြန်လည် ကူးယူဖေါ်ပြထားပါတယ်။
Posted in: ABSDF တောတွင်းဘ၀ပုံရိပ်,ABSDF မြောက်ပိုင်းပြဿနာ,မှတ်တမ်း,သတင်း
ABSDF မြောက်ပိုင်း ရဲမေဟောင်း မခင်ရွှေလှိုင် ရဲ့ ဆောင်းပါး (အပိုင်း ၁) မှ စပြီး သေသေချာချာ ဖတ်ရှု လေ့လာသင့်ပါတယ် says:
April 4, 2012 at 12:12 AM Reply
ABSDF မြောက်ပိုင်းကိစ္စဟာ အများ သိထားပြီးတာထက် ပိုမို ကျယ်ပြန့် ရှုပ်ထွေးပါတယ်။
ABSDF မြောက်ပိုင်း ရဲမေဟောင်း မခင်ရွှေလှိုင် ရဲ့ တင်ပြမှုမှာ ABSDF မြောက်ပိုင်း လူမဆန်စွာ ညှင်းပန်း သတ်ဖြတ်မှုတွေရဲ့ တခြား မျက်မြင်သက်သေတွေ၊ လေ့လာသူတွေရဲ့ တင်ပြမှုတွေနဲ့ အဓိကကွဲလွဲချက်က "ကျောင်းသားအုပ်စုချင်း အာဏာလုပွဲ ရိုးရိုး မဟုတ်ဘူး" ဆိုတာပါပဲ။
"ရန်သူ့သူလျှို ထောက်လှမ်းရေး အစစ်တွေက `ကျောင်းသားကို ကျောင်းသားက သတ်တဲ့ အဖြစ်မျိုး´ ဖြစ်လာအောင် အကွက်ဆင်ပြီး ABSDF မြောက်ပိုင်းကို ဖြိုခွဲသွားတာပါ" ဆိုတဲ့ အယူအဆကို မခင်ရွှေလှိုင်က တင်ပြထားပါတယ်။
မခင်ရွှေလှိုင် ရဲ့ တင်ပြမှုဟာ တခြား တင်ပြမှုတွေနဲ့ "ကွဲလွဲနေတယ်" ဆိုပြီး မခင်ရွှေလှိုင် ရဲ့ တင်ပြချက်တွေဟာ "အမှားတွေ" လို့ ချက်ခြင်း သတ်မှတ်ပြီး ဆက်မဖတ်ဘဲ ချက်ခြင်း မဆုံးဖြတ်သင့်ပါဘူး။ သမိုင်းမှန်ကို တကယ် ဖော်ထုတ်ချင်တယ် ဆိုရင် ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးက အစီရင်ခံတာ၊ သုံးသပ်တာတွေကို သေသေချာချာ လေ့လာပြီး စနစ်တကျ သုံးသပ်မှ အဖြေမှန် ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိ ABSDF ဥက္ကဌ ကိုသံခဲ ရဲ့ဇနီး မခင်ရွှေလှိုင်ဟာ ABSDF မြောက်ပိုင်းမှာ ကိုယ်တွေ့ ဖြတ်သန်းလာသူ ဖြစ်လို့ သူ့အတွေ့အကြုံကို အခြေခံပြီး သူ့ရှုထောင့်က တင်ပြချက်တွေကိုလည်း ဂရုတစိုက် ဖတ်ရှု လေ့လာဖို့ လိုပါတယ်။
"မြောက်ပိုင်းကျောင်းသားတပ်မတော်ကို ဖြိုခွဲသွားတဲ့ တရားခံအစစ်က ဘယ်သူတွေလဲ"
(ABSDF မြောက်ပိုင်း ရဲမေဟောင်း မခင်ရွှေလှိုင် ရဲ့ ဆောင်းပါး)
(အပိုင်း ၁) မှ စပြီး သေသေချာချာ ပြန်ဖတ်နိုင်အောင် အောက်မှာ တဆက်တည်း တင်ပေးပါမယ်။
မြောက်ပိုင်းကျောင်းသားတပ်မတော်ကို ဖြိုခွဲသွားတဲ့ တရားခံအစစ်က ဘယ်သူတွေလဲ (အပိုင်း ၁) says:
April 4, 2012 at 12:33 AM Reply
၁၉၈၈ မှာ နန်းရှေ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ အနေနဲ့ မန္တလေးတက္ကသိုလ် (ပင်မ) မှာ ပူးပေါင်းပါဝင် ချီတက် ဆန္ဒပြခဲ့တယ်။ အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက် “အမျိုးသားနိုင်ငံရေးကျောင်းသားလူငယ်အဖွဲ့ (အနကလ)” ရဲ့ ဆိုင်းပုဒ်အောက်မှာ အမျိုးသား နိုင်ငံရေးတပ်ပေါင်းစု (မနတ)၊ လူ့ဘောင်သစ်၊ ဒီမိုကရက်တစ်ဘွဲ့ရကျောင်းသားဟောင်းများအဖွဲ့ (ဂေါ့စဒါ) (GOSDA) (Graduates and Old Students Democratic Association) တို့နဲ့ လက်တွဲပြီး အဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှု၊ ဗကသ လှုပ်ရှားမှု၊ ယူဂျီလုပ်ငန်း တချို့မှာ ပါဝင် ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ တောထဲမှာ ဘယ်လို နေခဲ့သလဲ သိလိုရင်တော့ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း (၄၀၁) တပ်ရင်းက ရဲဘော်တွေ။ မြောက်ပိုင်းကချင်ကျောင်းသားတပ်မတော်က ရဲဘော် ရဲမေတွေကို မေးကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ကေအိုင်အေ အပစ်အခတ် ရပ်စဲပြီးနောက် (၁၉၉၆ - ၉၇) မှာ ကျမ အမေရဲ့ နောက်ဆုံးဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းဖို့ အိမ်က လာခေါ်တဲ့အတွက် မြောက်ပိုင်းမှာ လုပ်သက် (၅) နှစ်ပြည့် ရဲမေများကို တရားဝင် အိမ်ပြန်ခွင့်ပြုချက် အရ အမှောင်ပြန်ဝင်ခဲ့တယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ မန္တလေးလှုပ်ရှားမှုရဲ့ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တဦး ကျမနဲ့ တွေ့ခဲ့တယ်။ “မင်းမှာလည်း တာဝန်ရှိတယ်၊ ဘာလို့ မတားမြစ်ခဲ့တာလဲ” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းအပေါ် “ကိုယ်တိုင် လာနေကြည့်မှပဲ သိနိုင်မယ်” လို့ ဖြေခဲ့တယ်။
“မင်းရဲ့အမြင်တွေကို ရေးပေးနိုင်မလား” လို့ တောင်းခံလာခဲ့တဲ့အပေါ် “အခုချိန်မှာ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဘာမှ ရေး မပေးနိုင်ဘူး” လို့ ဖြေခဲ့တယ်။ သိချင်လို့ မေးလာတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုတော့ “တချို့လူတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်” လို့ ဖြေခဲ့တယ်။
၁၉၉၈ မှာ အိန္ဒိယ (မဏိပူ တပ်စခန်း) (camp) ကို ရောက်တယ်။ (လူလိမ္မာ အခါခါမိုက်)။ အေဘီ (အနောက်ပိုင်း) တာဝန်ရှိသူက "ရဲမေ လုပ်မလား၊ အိမ်ထောင် သည်လုပ်မလား" လို့ ကျမကို မေးခဲ့တဲ့အပေါ်မှာ ကျမဟာ "အထဲကို ပြန်ဝင်ခဲ့တဲ့ သူ" တယောက် အဖြစ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို လိပ်ပြာ မသန့်တဲ့အတွက် အိမ်ထောင်သည်ကို ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ ဘယ်လိုနေခဲ့သလဲ သိလိုရင်တော့ အိန္ဒိယက ရဲဘော် ရဲမေတွေ၊ ထိုင်းနယ်စပ် လက်ရှိ ကျောင်းသားတပ်မတော်က ရဲဘော်တွေနဲ့ သူတို့ရဲ့မိန်းမတွေ၊ နိုင်ငံတကာမှာ ရောက်နေတဲ့ ရဲဘော်တွေနဲ့ မိသားစုတွေ၊ ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ ကျမစာသင်ပေးခဲ့တဲ့ ကလေးတွေကို မေးနိုင်ပါတယ်။
၂၀၁၀ မှာ ကျမသမီးရဲ့ ပညာရေးနဲ့ အနာဂတ်အတွက် သြစတြေလျကို ရောက်တယ်။ လက်ရှိ သြစတြေလျ မှာပါ။
ကျမဟာ မြို့မှာက တည်းက ကိုထွန်းအောင်ကျော် (GTI ၊ မန္တလေး) (အသတ်ခံရ) ၊ ကိုအောင်နိုင် (MC ၊ မန္တလေး) (လက်ရှိ - ချင်းမိုင်) ၊ ကိုစိုးလင်း (RIT မန္တလေး) (တောင်ပိုင်းမှာ အဖမ်းခံရပြီး ပြန်လွတ်မြောက်) တို့နဲ့အတူ လက်တွဲ လုပ်လာခဲ့သူ တယောက် ဖြစ်သလို သူတို့ (၃) ယောက် ရှောင်ပုန်းနေခဲ့ရာကတဆင့် တောထဲကို သွားရမှာဖြစ်လို့ ကျမ (ရုက္ခဗေဒ ဒုတိယနှစ်၊ ဂုဏ်ထူးတန်း၊ မန္တလေး) ကို မြို့လမ်းကနေတဆင့်သွားဖို့ ကိုညီညီရဲ့အစ်ကို ကိုမောင်မောင် (ရွှေကရ၀ိက်) နဲ့ ကိုထွန်းအောင်ကျော်ရဲ့ အကိုဝမ်းကွဲ ကိုချိုကြီး (မန္တလေး ယူဂျီ) တို့ စီစဉ်ပေးခဲ့ကြတာပါ။
တောထဲကို လာခဲ့တုန်းက ကျမ တယောက်တည်းပါ။ ဘယ်အဖော်မှ မပါပါဘူး။ ကျမ တောထဲရောက်မှ ကိုသံချောင်း (မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်၊ မိုးညှင်း - မော်ဟန်)၊ ကိုမျိုးဝင်း (RIT ၊ မိုးညှင်း - နမ္မား) ဒေသခံ ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ဆုံတွေ့ခဲ့တယ်။
မြောက်ပိုင်းကျောင်းသားတပ်မတော်ကို ဖြိုခွဲသွားတဲ့ တရားခံအစစ်က ဘယ်သူတွေလဲ (အပိုင်း ၁) - ၁ says:
April 4, 2012 at 12:53 AM Reply
အမေ ပေးထားတဲ့ ကျမရဲ့နာမည်က ခင်ရွှေလှိုင်၊ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့တလျှောက် အခုချိန်ထိ ဒီနာမည်နဲ့ပဲ နေပါတယ်။ မမွေးခင် ကတည်းက “လူထု” ဆိုတဲ့ စကားလုံးက ကျမနဲ့ ရင်းနှီးပြီးသားပါ။ အဲဒီ စကားလုံးလေးကို ကျမအဖေက မြတ်နိုးလွန်းလို့ လူထု ဦးလှနဲ့ ဒေါ်အမာတို့ဆီက ခွင့်ပြုချက် တောင်းပြီး မိသားစုနာမည် အဖြစ် အသုံးပြုခဲ့တာမို့ "မန္တလေး၊ နန်းရှေ့၊ လူထုမိသားစု" လို့ သိလိုရင် မေးကြည့်နိုင်ပါတယ်။
မြောက်ပိုင်းကျောင်းသားတပ်မတော်ကို ဖြိုခွဲသွားတဲ့ တရားခံအစစ်က ဘယ်သူတွေလဲ (အပိုင်း ၁) - ၂ says:
April 4, 2012 at 12:55 AM Reply
ကေအိုင်အေ အပစ်အခတ် ရပ်စဲပြီးနောက် (၁၉၉၆ - ၉၇) မှာ ကျမ အမေရဲ့ နောက်ဆုံးဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းဖို့ အိမ်က လာခေါ်တဲ့အတွက် မြောက်ပိုင်းမှာ လုပ်သက် (၅) နှစ်ပြည့် ရဲမေများကို တရားဝင် အိမ်ပြန်ခွင့်ပြုချက် အရ အမှောင်ပြန်ဝင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ မန္တလေးလှုပ်ရှားမှုရဲ့ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တဦး ကျမနဲ့ တွေ့ခဲ့တယ်။ “မင်းမှာလည်း တာဝန်ရှိတယ်၊ ဘာလို့ မတားမြစ်ခဲ့တာလဲ” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းအပေါ် “ကိုယ်တိုင် လာနေကြည့်မှပဲ သိနိုင်မယ်” လို့ ဖြေခဲ့တယ်။ “မင်းရဲ့အမြင်တွေကို ရေးပေးနိုင်မလား” လို့ တောင်းခံလာခဲ့တဲ့အပေါ် “အခုချိန်မှာ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဘာမှ ရေး မပေးနိုင်ဘူး” လို့ ဖြေခဲ့တယ်။ သိချင်လို့ မေးလာတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုတော့ “တချို့လူတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်” လို့ ဖြေခဲ့တယ်။
၁၉၉၈ မှာ အိန္ဒိယ (မဏိပူ တပ်စခန်း) (camp) ကို ရောက်တယ်။ (လူလိမ္မာ အခါခါမိုက်)။ အေဘီ (အနောက်ပိုင်း) တာဝန်ရှိသူက "ရဲမေ လုပ်မလား၊ အိမ်ထောင် သည်လုပ်မလား" လို့ ကျမကို မေးခဲ့တဲ့အပေါ်မှာ ကျမဟာ "အထဲကို ပြန်ဝင်ခဲ့တဲ့ သူ" တယောက် အဖြစ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို လိပ်ပြာ မသန့်တဲ့အတွက် အိမ်ထောင်သည်ကို ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ဘယ်လိုနေခဲ့သလဲ သိလိုရင်တော့ အိန္ဒိယက ရဲဘော် ရဲမေတွေ၊ ထိုင်းနယ်စပ် လက်ရှိ ကျောင်းသားတပ်မတော်က ရဲဘော်တွေနဲ့ သူတို့ရဲ့မိန်းမတွေ၊ နိုင်ငံတကာမှာ ရောက်နေတဲ့ ရဲဘော်တွေနဲ့ မိသားစုတွေ၊ ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ ကျမစာသင်ပေးခဲ့တဲ့ ကလေးတွေကို မေးနိုင်ပါတယ်။
၂၀၁၀ လက်ရှိမှာ ကျမသမီးရဲ့ ပညာရေးနဲ့ အနာဂတ်အတွက် သြစတြေလျကို ရောက်တယ်။ ကျမဟာ မြို့မှာက တည်းက ကိုထွန်းအောင်ကျော် (GTI ၊ မန္တလေး) (အသတ်ခံရ) ၊ ကိုအောင်နိုင် (MC ၊ မန္တလေး) (လက်ရှိ - ချင်းမိုင်) ၊ ကိုစိုးလင်း (RIT မန္တလေး) (တောင်ပိုင်းမှာ အဖမ်းခံရပြီး ပြန်လွတ်မြောက်) တို့နဲ့အတူ လက်တွဲ လုပ်လာခဲ့သူ တယောက် ဖြစ်သလို သူတို့ (၃) ယောက် ရှောင်ပုန်းနေခဲ့ရာကတဆင့် တောထဲကို သွားရမှာဖြစ်လို့ ကျမ (ရုက္ခဗေဒ ဒုတိယနှစ်၊ ဂုဏ်ထူးတန်း၊ မန္တလေး) ကို မြို့လမ်းကနေတဆင့်သွားဖို့ ကိုညီညီရဲ့အစ်ကို ကိုမောင်မောင် (ရွှေကရ၀ိက်) နဲ့ ကိုထွန်းအောင်ကျော်ရဲ့ အကိုဝမ်းကွဲ ကိုချိုကြီး (မန္တလေး ယူဂျီ) တို့ စီစဉ်ပေးခဲ့ကြတာပါ။ တောထဲကို လာခဲ့တုန်းက တယောက်တည်းပါ။ ဘယ်အဖော်မှ မပါပါဘူး။ တောထဲရောက်မှ ကိုသံချောင်း (မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်၊ မိုးညှင်း - မော်ဟန်)၊ ကိုမျိုးဝင်း (RIT ၊ မိုးညှင်း - နမ္မား) ဒေသခံ ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ဆုံတွေ့ခဲ့တယ်။
မြောက်ပိုင်းကျောင်းသားတပ်မတော်ကို ဖြိုခွဲသွားတဲ့ တရားခံအစစ်က ဘယ်သူတွေလဲ (အပိုင်း ၁) - ၃ says:
ကျမကိုယ် ကျမ တာဝန်ခံရဲတာက ကျမ တောထဲကို လာခဲ့တာ တော်လှန်ရေးလုပ်ဖို့ ဆိုတာကိုပါ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုးကွယ်မှုတွေ၊ ဒေသစွဲတွေ လုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူး ဆိုတာကိုပါ။
ကျောင်းသားတပ်မြောက်ပိုင်းမှာ သူလျှို လို့ စွပ်စွဲ ဖမ်းဆီးပြီး နှိပ်စက် သတ်ဖြတ်တာတွေကို လုပ်တဲ့သူတွေဘက်ကလည်း "ဒီလူတွေအားလုံးဟာ ရန်သူ့သူလျှိုတွေပါ" လို့ စွပ်စွဲခဲ့သလို "သူတို့မှာ ခိုင်လုံတဲ့ သက်သေ အထောက်အထားတွေ ရှိတယ်၊ တချိန်ချိန်မှာ ဒီအတွက် ကြိုးစင်တက်ရမယ် ဆိုရင်လည်း ကြိုးစင်တက်မယ်" လို့ ပြောခဲ့ကြတယ်။
သူလျှို လို့ စွပ်စွဲ ဖမ်းဆီးပြီး နှိပ်စက်တာတွေကို ခံရသူတွေဘက်ကလည်း "ငါတို့အားလုံးဟာ တယောက်မှ ရန်သူ့သူလျှို မဟုတ်ဘူး၊ မတရား လုပ်တာ ခံခဲ့ကြရတဲ့ ကျောင်းသား အစစ်အမှန်တွေပါ" လို့ ပြောခဲ့ကြတယ်။
ကျမကတော့ နှစ်ခုစလုံးကို လက်မခံချင်တဲ့သူ။ "၅၀၀ လောက် ရှိတဲ့တပ်ကို ဖြိုဖို့ ရန်သူ့သူလျှို ၅ ယောက်တောင် မလိုသလို ရန်သူ့လူ အမှန်တကယ် မပါခဲ့ရင်လည်း ဒါတွေ ဖြစ်လာစရာ အကြောင်းမရှိဘူး" လို့ ကျမ ယူဆတယ်။
"ရန်သူ့သူလျှို တယောက်မှမပါဘဲ အေဘီ မြောက်ပိုင်းက ကျောင်းသားရဲဘော် အချင်းချင်း တောထဲမှာ အာဏာလုခဲ့ကြတာပါ" ဆိုတဲ့ ပုံပြင်က ရိုးစင်းလွန်းအားကြီးပါတယ်။ အာဏာလုတာ မှန်ရင် အမျိုးသမီးရဲမေတွေ နဲ့ အောက်ခြေက ရဲဘော်တွေ အများကြီးကို ဖမ်းစရာအကြောင်း မရှိပါဘူး။
သေချာတာကတော့ ကျောင်းသားလူငယ်တွေရဲ့ အတွေ့အကြုံ နုနယ်မှုနဲ့ ရဲစိတ်ရဲမာန် ထက်သန်နေကြမှု ကို အသုံးချပြီး တိုက်စရာမလိုဘဲ " `ကိုယ့်လူ ကိုယ်ပြန်စားနည်း´ (ရန်သူ့သူလျှိုကို ထွက်ပေါက် အသင့်ပေးထားပြီးသား၊ ကာကွယ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ `ကျောင်းသားကို ကျောင်းသားက သတ်တဲ့ အဖြစ်မျိုး´ ဖန်တီးခြင်း) နဲ့ ဖြိုခွဲဖို့ ဆင်ထားတဲ့ ရန်သူ့ရဲ့ပရိယာယ် ထောင်ချောက်ထဲကို ကျမတို့အားလုံး ၀င်မိခဲ့ကြတယ်" ဆိုတာပါပဲ။
အစီစဉ်ရှိရှိ လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အပေါ် အစီစဉ်ရှိရှိ ပြန် အသုံးချနိုင်ဖို့ ကျောင်းသားတပ်ရဲ့ စစ်ရုံး၊ ကော်မတီရုံးတွေ ထဲမှာ ရှိနေရမဲ့ ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေ၊ ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေ၊ စစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေလက်ထဲ၊ ကိုယ်လွတ်ရုန်းပြီး ပြေးခဲ့ရပါတယ် ဆိုတဲ့ လူတချို့ရဲ့ လက်ထဲကနေ အလျှိုလျို ပလူပျံပြီး ထုတ်ဝေဖို့ စာအုပ် အသင့် နဲ့အတူ လက်ရှိ နိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ အချိန်ကိုက် ပေါ်ထွက်လာနေပုံကလည်း “ဒါကို စနစ်တကျ လုပ်သွားခဲ့တဲ့ `သူလျှိုတစု´ ရှိနေတယ်” ဆိုတဲ့ သင်္ကေတကို ညွန်ပြနေပါတယ်။
(နေ့သစ် http://www.naytthit.net/?p=25841 မှ ကူးယူ ဖော်ပြပါတယ်။)
(ဒီ မှတ်ချက်ရဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်ပြီး မူရင်းဆောင်းပါး
"မြောက်ပိုင်းကျောင်းသားတပ်မတော်ကို ဖြိုခွဲသွားတဲ့ တရားခံအစစ်က ဘယ်သူတွေလဲ (၁)" ကို နေ့သစ် ဝက်ဆိုက် မှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။)
April 4, 2012 at 11:41 AM Reply
I have no idea why u post Daw Khin Shwe Hlaing's posts. But I don't think U believe her :-))Some parts may be true but not all, that's I feel. I believe only what's Ma Nan Aung Htwe Kyi said. Nobody can't hide the truth. We are Buddhist and I believe Kama. We can lie to others but not ourselves.
ABSDF မြောက်ပိုင်း ရဲမေဟောင်း မခင်ရွှေလှိုင် ဆောင်းပါး (အပိုင်း ၁) ကို ABSDF မြောက်ပိုင်းမှာ ကိုယ်တိုင် နှိပ်စက်ခံခဲ့ရပြီး ထွက်ပြေးခဲ့တဲ့ ကိုညီညီ ရဲ့ ပြန်ကြားစာ says:
April 4, 2012 at 2:58 PM Reply
ခင်ရွှေလှိုင်ကို ခင်မင်ဖူးတဲ့ ရဲဘော်ရဲမေတဦးအနေနဲ. အကြံပေးလိုတာက ဘယ်အရာကိုမှ မိမိသမိုင်းကြောင်းနဲ. ဂုဏ်သိက္ခာအတွက် တွယ်ဖက်မနေပါနဲ.။ အမှန်တရားကို တွေ.ပြီ၊ သိပြီ ဆိုတာနဲ. ရဲရဲ ဝန်ခံပြီး အဖြစ်မှန်တွေကို ဖွင့်ချပါ။
ကိုယ် အဖမ်းမခံရ... ပြီးရော ဆိုပြီး အခြားသူတွေ အဖမ်းခံနေရချိန်မှာ ဖာသိဖာသာ နေနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် အရှက်တရားထားပြီး မကဒတ ရဲ. ဂုဏ်သိက္ခာအတွက် ပြန်လည် ဆေးကြောခြင်း၊ မကဒတ မျက်နှာဖုံးအောက်မှာ ရာဇဝတ်မှုတွေကို ကျုးလွန်ခဲ့တဲ့ ရာဇဝတ်သားတွေကို ဖော်ထုတ်ရေး အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ပေးပါ။ အနည်းဆုံးတော့ ကိုယ်ရဲ. မျိုးဆက်ကလေးတွေအနေနဲ. လူ.ဘဝထဲ ရဲရဲဝံဝံနဲ. သူများတွေမျက်နှာကို ကြည့်ရဲတဲ့သူတွေ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
ခင်ရွှေလှိုင်ရဲ. comment ထဲက "လူ ၅ ယောက်လောက် ဆိုရင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်" လို. ဆိုတော့ "ကျန်တဲ့ လူ ၁၀၀ ကျော် မတရား ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာ၊ သေတဲ့သူ ၄၀ လောက်ထဲက ၃၅ ယောက်လောက်ကတော့ အပြစ်မဲ့သူတွေပါ" လို. ခင်ရွှေလှိုင် ဝန်ခံလိုက်ပြီပေါ.။ အဲဒီတော့ GOSDA (The Graduates and Old Students' Democratic Association) ရုံးကနေပြီး နိုင်ငံရေးလုပ်သွားတဲ့ သူတဦးက မိခင်အဖွဲ. အနကလ ရဲ. ဥက္ကဌ က ဦးစီးပြီး လူသတ်ပွဲ၊ နှိပ်စက်ပွဲ လုပ်ခဲ့တာကိုတော့ လက်ပိုက်ပြီး ကြည့်နေခဲ့တာ၊ အနှစ် ၂၀ ကျော် ဘာမှ မပြောပဲ နေခဲ့တာ လိပ်ပြာသန်.ပါသလား လို. မေးချင်ပါတယ်။
နောက်ပြီး သံခဲနဲ. ပက်သက်ပြီး သူယူထားတဲ့နေရာ၊ သူမြောက်ပိုင်းနဲ. ပက်သက်ခဲ့မှုတွေအတွက် သူပြန်ပေးဆပ်ခဲ့တာက ရာဇဝတ်မှုတွေကို လက်ပိုက် ထိုင်ကြည့်ပြီး နှုတ်ပိတ်နေခဲ့ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တောင်ပိုင်းမှာ တယောက်နဲ.တယောက် အပြစ် ပုံချပြီး ကိုယ်လွတ်ရုန်းဖို. ကြိုးစားနေတဲ့ သူတွေအကြောင်း ခင်ရွှေလှိုင် ပိုသိမှာပါ။
အမှန်ကိုမြင်ပြီး ပူးပေါင်းလာမယ်ဆိုရင် (ကိုယ်တိုင် ရာဇဝတ်မှုတွေကို ကျုးလွန်ထားတာ မရှိလို.) အားလုံးက ခွင့်လွတ်နိုင်ကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ခင်ရွှေလှိုင် အပါအဝင် မည်သူမဆို ရာဇဝတ်မှု ဖော်ထုတ်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းလာကြမယ်ဆိုရင် ကြိုဆိုပါတယ်။
နောက်တခါ တောင်ပိုင်းမှာ ထပ်မံ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း ခံနေရတဲ့ ကျနော်တို.၇ဲ. သေဖော်သေဖက် ၃ ဦးကိုလည်း ခင်ရွှေလှိုင် ရဲ. ခင်ပွန်းမှတဆင့် အကာအကွယ်ပေးဖို. ပြောဆိုပေးပါ။ ရာဇဝတ်မှုအသစ်တွေ ထပ် မဖန်တီးကြပါနဲ.တော.။ များများ လုပ်ထားတဲ့သူတွေကတော့ များများ အပြစ်ခံ ရမှာ ဖြစ်ပေမဲ့ နည်းနည်းပဲ လုပ်ထားတဲ့ သူတွေကတော့ နည်းနည်းပဲ ခံရမှာဖြစ်ပြီဲး အလျှင်းသင့်ရင် ခွင့်လွတ်မှုကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
မေးစရာလေး ကျန်သွားလို. မေးကြည့်ပါရစေ။ ခင်ရွှေလှိုင်က ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ရင် စပိုင် ၅ ယောက်လောက်တော့ ရှိလိမ့်မယ် ဆိုတော့ အဲဒီ သံသယ ရှိတဲ့ စပိုင် ၅ ယောက်ရဲ. နာမည်လေးကို တဆိတ်လောက် POST မှာ တင်ပေးစမ်းပါ။ ဒီမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ လူ ၁၀၀ လောက်က ဝိုင်းစုံစမ်းကြ၊ စစ်ဆေးကြ လုပ်ကြပေမဲ့ အနှစ် ၂၀ ကျော်တဲ့အထိ တယောက်မှ မပေါ်လို.ပါ။
ဒါပေမဲ့ မကဒတ ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ.မှာ ပါခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ မသင်္ကာစရာ လူတွေနဲ.ပေါင်း၊ မသင်္ကာစရာ အဖွဲ.တွေနဲ.ပေါင်းပြီး မသင်္ကာစရာ အလုပ်တွေ လုပ်နေကြလေရဲ.။
ခင်ရွှေလှိုင် ဆက်ရေးမဲ့ POST တွေကို ဆက်ဖတ်နေရအုံးမယ်လို. မျှော်လင့်နေတဲ့ ……………………
ko lin wai aung facebook မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
(လင်္ကာ ဘလော့ မှ ကူးယူ ဖော်ပြပါသည်။)
ညီညီ (မြောက်ပိုင်းရဲဘော်ဟောင်း) မှ ခင်ရွှေလှိုင် သို့ ပြန်ကြားစာ (March 27, 2012) ကို ဖော်ပြထားတဲ့ စာမျက်နှာများ
(1) လင်္ကာ ဘလော့
(2) ဘရာဇီး ငှက်ရိုး @ facebook (Posted by Baydar Lam, March 27)
(3) အိုးဝေအောင် အိုးဘားမား (HitTai OwayAung) @ facebook (Posted by Baydar Lam, March 27)
ABSDF မြောက်ပိုင်း မျက်မြင်သက်သေ ကိုညီညီ မှ မခင်ရွှေလှိုင် ဆောင်းပါး (အပိုင်း ၁) ကို ပြန်ကြားစာ says:
April 4, 2012 at 3:08 PM Reply
ABSDF မြောက်ပိုင်း ရဲမေဟောင်း မခင်ရွှေလှိုင် ဆောင်းပါး (အပိုင်း ၁) ကို ABSDF မြောက်ပိုင်းမှာ ကိုယ်တိုင် နှိပ်စက်ခံခဲ့ရပြီး ထွက်ပြေးခဲ့တဲ့ ကိုညီညီ ရဲ့ ပြန်ကြားစာ
April 4, 2012 at 5:51 PM Reply
Pls stop for copying other's posting.
Why you always dig the old things. Now , all are changed already. You have to think about it.
April 5, 2012 at 4:26 PM Reply
Why the main persons are silent?They should come out and discuss about it face to face.The readers are not stupid.Let the media interview.
April 6, 2012 at 2:20 AM Reply
ကျတော်ဖတ်လာတာဆောင်းပါးအမှတ် ၁ ကနေ ၅ အထိ၇ှိလာပြီး..အခုသထိ ဘယ်သူက ထောက်လှမ်းေ၇း
ဆိုတာ မကွဲပြားသေးဘူး ဟိုလူလိုလို ဒီလုလိုလိုနဲ.
၇က်၇က်စက်စက်သတ်၇တာလဲ? ထိုးကျွေးခံ၇တယ်ဆိုတဲ.ကိုထွန်းအောင်ကျော်၊ကိုချိုကြီး၊ဦးစိန်တို.ကို ထိုးကျွေးခံ၇မှန်း မခင်ေ၇ွှလှိုင်တောင်သိ
April 7, 2012 at 9:50 PM Reply
I have no idea why u post Daw Khin Shwe Hlaing's posts. But I don't think U believe her :-))Some (((((parts may be true but not all, that's I feel. I believe only what's Ma Nan Aung Htwe Kyi said. Nobody can't hide the truth. We are Buddhist and I believe Kama. We can lie to others but not ourselves.
April 4, 2012 11:41 AM))))) မှတ်ချက်ပေးတဲ့သူက PN လို့ ရေးထားပေမဲ့ ဘယ်သူလဲဆိုတာ ကျွန်မ မသိတာ ဆောရီးပါ။ ကျွန်မ မှတ်သားရသလောက် မခင်ရွှေလှိုင်ရေးတဲ့အထဲမှာ သူ့အတွေ့အကြုံ သူ့ဘ၀ဖြတ်သန်းမှုကို သူရေးထားတာသာ ဖြစ်ပြီး အဲဒီကြုံတွေ့ခဲ့ရတာတွေအပေါ် သူ့အမြင်နဲ့သူ သုံးသပ်ထားတာကိုသာ တွေ့ရပါတယ်။ တခြားသူရေးထားတဲ့ အချက်အလက်တွေနဲ့ မတူလို့ မှားတယ်လို့ သတ်မှတ်လို့ မရနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်မကြည့်တာ တခြားသူတွေ ရေးတာနဲ့ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် လွဲနေတာလည်း မတွေ့ပါဘူး။ တခြားသူတွေကလည်း သူတို့အတွေ့အကြုံသူတို့ ရေးတယ် မခင်ရွှေလှိုင်ကလည်း သူ့အတွေ့အကြုံသူရေးတယ်။ လွဲနေတာဆိုလို့ မခင်ရွှေလှိုင်က အဲဒီအထဲမှာ ရန်သူ့လူပါတယ်လို့ ပြောပြီး တခြားသူတွေက ရန်သူ့လူတယောက်မှ မပါဘူးဆိုတာနဲ့ တခြားသူတွေက ဒေါက်တာနိုင်အောင် မြောက်ပိုင်းကိုလာတာ ဖေဖေါ်ဝါရီမှာလို့ ပြောတယ်။ မခင်ရွှေလှိုင်က ဧပြီမှာလို့ပြောတယ်။ ဒါပဲအဓိက လွှဲနေတာရှိပြီး ကျန်တာတွေကတော့ သူ့တို့အတွေ့အကြုံတွေအပေါ် အခြေခံပြီး သူတို့အမြင်သူပြောကြတဲ့ အပေါ်မှာ လွဲတယ်မလွဲဘူး ဆိုတာဘေးက ပြောလို့မရနိုင်ဘူး။ တခု သတိထားမိဖို့ သင့်တာက မခင်ဆွေလှိုင်မှာ ဒီစာကိုေ၇းရာမှာ ဘယ်ကဘာဖိအားမှ မပါရှိပါလို့ အဖြစ်မှန်ကို လွဲမှားစေနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေ သူ့မှာလုံးဝကင်းတယ်။ ပပမာ နအဖသတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာလို အာဏာရှင် အလိုကျ ဖန်တီးရတဲ့အခြေအနေမျိုး ကင်းတယ်၊ ခံထားခဲ့ရသူတွေမှာလို စိတ်မှာ ဒဏ်ရာအနာတရနဲ့ ရေးတာမျိုး ကင်းတယ်၊ ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ထားခဲ့သူ မဟုတ်လို့ မိမိကိုယ်ကိုယ် အပြစ်ကင်းစင်ကြောင်း ကာကွယ်ပြီး ရေးစရာအကြောင်း မရှိဘူး။ ဒါကြောင့် သူရေးတာတွေမှာ ဘာအဂတိမှ မစွက်ဖက်နိုင်ဘူး တကယ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်း သူကြုံတာကို သူရေးပြီး သုံးသပ်ထားတာသာ ဖြစ်တယ်။ ကျွန်မဖတ်ရသလောက် သူရေးထာား လွဲချော်နေတဲ့အချက် အခုထိ တခုမှမတွေ့သေးဘူး။ လူသတ်သမားတွေကို သူကာကွယ်ထားတဲ့အချက် ကျွန်မ တချက်မှမတွေ့ဘူး။ မဟုတ်ဘူးလို့ ငြင်းနေသူတွေကပဲ သူ့ကို အခြေအမြစ်မရှိ လူသတ်သမားကို ကာကွယ်တယ်နဲ့ ပြောနေတာတွေ့တယ်။
လူပုဂ္ဂိုလ်တချို့ ဥပမာ ကိုမျိုးဝင်း ကိုသံချောင်းတို့ရဲ့ Personality တွေကို သူမြင်လို့ မြင်တဲ့အတိုင်း ပြောတာကို လူသတ်သမားကို ကာကွယ်တယ်လို့ ပြောလို့မရနိုင်ဘူး။ တခြား သူသိတဲ့အချက်အပေါ် သူခန့်မှန်းတဲ့ ရန်သူလူဖြစ်နိုင်တယ် ဆိုတဲ့သူတွေအပေါ် အမြင်တွေကတော့ သူနဲ့သာဆိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကိုလည်း သူကအရမ်းကာရော ဘလိုင်းကြီး ရန်သူလူလို့ ပြောထားတာကို မတွေ့ရဘူး။ ဒီလိုဒီလို အချက်တွေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဒီလူဟာ ဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီး အချက်ကိုထောက်ပြလိုက် သုံးသပ်လိုက်နဲ့ ပြောထာားပဲ တွေ့ရတယ်။ သူထင်တာ မှားတယ်မှန်တယ် ဆိုတာ အခုချိန်မှာ တိတိကျကျ ဘယ်သူမှ အာမခံချက် မပေးနိုင်ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ စာအရေးအသားတွေထဲမှာ ပါတဲ့ ဖြတ်သန်းမှုတွေက ၀တ္တုရေးသလို၊ ဒါမှမဟုတ် တစုံတယောက် ဖိအားပေးလို့ လုပ်ကြံဖန်တီးပြီး ရေးထားတဲ့အသွင်လက္ခဏာ လုံးဝမတွေ့ရပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ သူရေးထားတဲ့ Fact (not opinion) တွေကို ကျွန်မ ယုံတယ်။ ကျွန်မတို့ဟာ ခံခဲ့ရသူတွေ ရေးထာကိုပဲ တောက်လျှောက် ဖတ်လာခဲ့ရတယ်။ အခု ဘယ်ဘက်မှာမှ မပါခဲ့တဲ့ သာမန်ရဲမေတယောက်ရဲ့ အတွေ့အကြုံနဲ့ တင်ပြမှုတွေကိုလည်း တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချက်အလက်တွေအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုရမှာဖြစ်တယ်။ နောက်ထပ် ဒီလို သာမန်ရဲဘော်ရဲမေတွေထဲကေ၇းတာကို များများကြိုဆိုသင့်ပါတယ်။ အထင်ကအထင်ပဲ အမှန်တရားက အမှန်တရားပဲ။ အထင်ဆိုတာ အမှန်တရားမဟုတ်တဲ့အတွက် ကိုယ်ထင်ထားတာနဲ့ မတူတိုင်းမှားတယ်လို့ ပြောလို့မရဘူး။ ဒါကျွန်မ အမြင်ဖြစ်တယ်။ အခြေအမြစ်ရှိရှိ ပြန်ဆွေးနွေးရင် ကြိုဆိုပါတယ်။ ဒီထဲမှာ မပြောချင်ရင်လည်း ngenaing2008@gmail.com ကိုမေးလ်ပို့နိုင်ပါတယ်။